I-Bocas Bali I-Luxury Water Villas | I-Bocas del Toro Resorts - Amahhotela Kanokusho ePanama
Kungani Ngithenge Ibhulogi Yesiqhingi
Okuhamba phambili kwe-Bocas Del Toro Blog
Bocas Bali Ezindabeni
Indawo yaseBocas del Toro
Izikhathi Ezinhle Zokuvakashela
I-Panama's Private Island Luxury Escape
Iphinda ivulwe ngoSepthemba
Indawo Yokungcebeleka Yabantu Abadala 16+
Ukudla kwe-Epicurean Neziphuzo Kufakiwe
Azikho Izimali Zokukhansela noma Zokushintsha
“Ukuphila kuyinto eyivelakancane emhlabeni. Iningi labantu likhona, yilokho kuphela. ” - Oscar Wilde
Umdwebi wamapulani u-Andres Brenes, owaziwa kakhulu ngokuklama ihhotela elishisa kakhulu emhlabeni, udale omunye umsebenzi wobuciko ohehayo. Uma ubuka iDolobha laseBocas eligcwele umoya e-Bocas Del Toro, ePanama, kukhona indawo yokuphumula ephefumulelwe yase-Balinese ephefumulelwe phezu kwamanzi, i-Bocas Bali, eqhudelana nezindawo zokungcebeleka ezimangalisayo emhlabeni. Umsingathi wendawo yokungcebeleka yethu onothando uScott Dinsmore uqinisekisa ukuzizwisa okufudumele, okungasoze kwalibaleka ezivakashini zethu, ezijabulela ukuhlangana kwethu okungavamile kokuzenzakalela endaweni enhle yase-Caribbean.
I-Worlds First Aerial Beach
Yakhiwe Phezu Kwamanzi Ezintanjeni
Isuka emgwaqweni ohamba ngezinyawo obanzi uqonde ngqo kubhishi i-Kupu-Kupu, equkethe i-Tipsy Bar ezoduma maduze. Cwilisa ilanga nomoya ohelezayo futhi uqinisekise ukuthi uthola izitezi ezifana nechibi eziholela emanzini ahlanzekile ahlanzekile e-Caribbean ngokubhukuda kwantambama.
Izindawo zokuhlala e- Water Villas
Izivakashi zethu zijabulela ukuphila okungamamitha-skwele angu-1,100 okuphila okumangalisayo kwe-alfresco, ukuphumula phezu koLwandle lwe-Caribbean. Ngokungeziwe echibini langasese kanye nethala, i-villa ngayinye inombhede wenkosi onamalineni amahle kanye nomural oqoshwe ngesandla wensipho oqoshwe ngesandla. Ngesitayela sendabuko sase-Balinese, abadwebi banikezele amahora angaphezu kuka-1,000 ukubaza impahla ye-villa ngayinye yokhuni lwe-teak.
Ukudla & Ama-Cocktail
Izindawo zokudlela ezimbili
Okuhlangenwe nakho kwakho kokudla e-The Elephant House nase-The Coral Café kubikezela imali yokugibela engokwesiko ehlanganisa konke evuna izithako zasendaweni, ezintsha zasepulazini kanye nokudla kwasolwandle kwesifunda okutholakala kubadobi base-Bocas. Sikhuthazwe yi-greenhouse yethu esizeni, ongqondongqondo bethu bompheki oyinhloko izitsha ezintsha kukho konke ukudla.
Ukubhukuda noma snorkel ngqo kusuka phezu kwamanzi villa yakho. Noma hlola amanzi e-Caribbean azungeze isiqhingi sethu nge-kayak noma i-paddleboard. Ukuze uthole okuhlangenwe nakho okuyimfihlo kwe-snorkeling, isiqhingi esincane esinqamula ngqo kusuka kuma-villas siphethe impilo yasolwandle emangalisayo.
Amanzi ase-Bocas Bali afudumele unyaka wonke. Kodwa uma ukhetha amanzi ahlanzekile kunamanzi anosawoti, ichibi lethu le-clubhouse elimangalisayo liyindawo ezolile yokushiswa yilanga.
I-Art and Architectural Design
With Rich Balinese Undertones
Isiqhingi esincane esizimele e-Bocas Del Toro singase sibe indawo yokugcina ongalindela ukuthola izakhiwo ezimangalisayo ezithuthukisiwe ngemidwebo yetshe lensipho eqoshwe ngesandla kanye nocezu lobuciko bemvelo lwempande kashukela elingamathani amabili oluhlobisa inkundla ye-alfresco enemabula. Kulabo abathanda ubuciko - kulindelwe izimanga eziningi.
Ukuvikela izixhobo zethu zama-Coral
Sizimisele ngokugcina ubuhle bemvelo besiqhingi sethu esizimele kanye namanzi aso. I-Bocas Bali ikhishwe ngo-100% kugridi. Imigodi yamanzi igcina amalitha angu-55,000 amanzi emvula ukuze anikeze zonke izidingo zethu zamanzi ahlanzekile ahlanzekile. Futhi ilanga likhiqiza ugesi wethu ngendlela yamandla elanga.
Xhumana ne-Bocas Bali
I-Bocas Del Toro, Panama
Bheka i-boutique yethu
ihhotela likanokusho Costa Rica
© 2018-2022 Bocas Bali | Wonke Amalungelo Agodliwe
Iwebhusayithi nezithombe ngu I-Laabs Creative
Izinqubomgomo ze-Bocas Bali
Amanani ahlanganisa konke
Amanani asekelwe ekuhlaleni okukabili noma okukodwa (akukho ukuhlala okuphindwe kathathu noma okuphindwe kane)
Izintela azifakwa ngaphandle uma kuphawuliwe (10% wegumbi kanye no-7% wokudla neziphuzo)
Ubuncane bokuhlala ubusuku obungu-2, ukuhlala okungenani ubusuku obu-4 kusukela ngoDisemba 20 kuya kuJanuwari 2
Impahla yabantu abadala kuphela, izivakashi kumele okungenani zibe neminyaka eyi-16
Konke ukubhukha kuqinisekiswa nge-imeyili
Idiphozithi engu-50% iyadingeka ukuze uqinisekise ukubhukha. Ibhalansi ikhokhwa Ekungeneni. Uma idiphozi ingaqedwa phakathi namaviki amabili okubhuka, kuzokhanselwa ngokuzenzakalelayo.
I-Bocas Bali okwamanje ayikukhokhisi izimali zokukhansela noma zokushintsha. Nokho, uma uhlela ukukhansela. Sicela usazise kusenesikhathi ngangokunokwenzeka. Esimeni sokukhanselwa, idiphozithi yakho engu-50% izobuyiselwa phakathi kwezinsuku ezingu-30.
Umthetho kazwelonke wasePanama uyakwenqabela ukubhema ezindaweni ezivamile, ezindaweni zokudlela, nasezinkantini. Ukuze izivakashi zikhululeke, ihhotela linomgomo wokungabhemi ezindaweni ezivamile, okuhlanganisa nedamu lokubhukuda, amabha, nezindawo zokudlela. Izivakashi ezibhemayo kufanele zixhumane ne-Reception lapho zifika ezindaweni ezimisiwe ukuze zenze kanjalo. Ungabhema ethaleni le-Villa ngayinye. Kunenkokhiso engu-$200 yokutholwa kwegumbi kubantu abangathobeli le nqubomgomo.
Udinga Usizo Oluthile?
Sicela unikeze ulwazi lwakho kanye nezinsuku onethemba lokuhlala kuzo. Sizoxhumana nawe maduze.
Siyabonga ngentshisekelo yakho e-Bocas Bali. Sicela unikeze igama lakho, inombolo yocingo, nekheli le-imeyili futhi sizokufonela ngokushesha.